ငယ်ဘဝလေးကို ပြန်လွမ်းခွင့်ရလိုက်တဲ့ စိုးပြည့်သဇင် | Duwun
တောင်ငူမြို့ကို ချစ်တဲ့ တောင်ငူသူလေး စိုးပြည့်သဇင်က တောင်ငူမြို့မှာ လုပ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးပွဲမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လျှောက်လည်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. ဒီ့အတွက်လည်း သူ့ရင်ထဲက ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အခုလို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်.
ကလေးလေး တစ်ယောက်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြူစင်လှတဲ့ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်က တောင်ငူမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ လွတ်လပ်ရေးပွဲ တော်ကို သွားခွင့်ရလို့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေပါတယ်. ငယ်ဘဝလေးကိုလည်း ပြန်လွမ်းချင်တဲ့ သူမရဲ့ ဆန္ဒပါလို့လည်း သူကပြောပါတယ်.
''စိုးပြည့်တို့တောင်ငူရဲ့ လွတ်လပ်ရေးပွဲတော် ငယ်ငယ်တုန်းကအရမ်းသွားချင်တဲ့ပွဲ လွတ်လပ်ရေးပွဲရောက်ရင်လိုချင်တဲ့အရုပ်တွေပူဆာ စားချင်တာတွေစား.မသွားတဲ့နှစ်ရယ်လို့တစ်နှစ်မှမရှိ.၉တန်းအောင်ပြီးရန်ကုန်ပြောင်းသွားထဲကလွတ်လပ်ရေးပွဲကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖြစ်တော့.စိတ်ထဲတော့ရှိတယ်.တစ်ခေါက်လောက်သွားချင်သေးတယ်လို့..ခုတောင်ငူရောက်ဖြစ်တော့လွတ်လပ်ရေးပွဲနဲ့တည့်တည့်တိုး. အဲ့ဒါနဲ့လူကြီးတွေကိုပူဆာ.ဖုန်တွေနဲ့ချောင်းဆိုးမယ်.လူလည်းများတယ်လို့ပြောပေမဲ့.သွားချင်တာ..ပြန်လွမ်းချင်တာ ငယ်ဘဝကို.ဒါကြောင့်ရောက်အောင်သွားလည်ခဲ့ပြီးဝယ်ချင်တာတွေဝယ်ပြီးပြန်လာတယ်'' လို့ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်.
စိုးပြည့်သဇင်က နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် မြန်မာစာ အဝေးသင်နောက်ဆုံးနှစ်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေနေချိန်မှာလည်း နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တောင်ငူကေတုမတီမြို့တည်နန်းတည်(၅၀၈)နှစ်ပြည့်ပွဲတော်ကြီးမှာ ဘုရင့်သမီးတော် မင်းသမီးလေးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တာပါ
အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် အနုပညာရှင်မလေး စိုးပြည့်ဟာ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်နဲ့ အကယ်ဒမီရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူအကယ်ဒမီ ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားက "မိုးညအိမ်မက်မြူ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာသာမက အဆိုပိုင်းမှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းပိုင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချစ်သူရွေးမယ် တေးစီးရီးနဲ့ အချစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း ဆိုတဲ့ တေးစီးရီးများကို ထွက်ရှိထားသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ စိုးပြည့်သဇင်က စိုးမြတ်သူဇာ၊ စိုးမြတ်နန္ဒာ၊ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့နဲ့ အတူ မင်းသမီးပိုးထည်တိုက်ဆိုတဲ့ ပိုးထည်ဆိုင်ကို ဖွင့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ မကြာခင်မှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။